Lahatsary: Lalao Amerikana Tatsimo any Medellin, Colombia · Global Voices teny Malagasy
Lahatsary: Lalao Amerikana Tatsimo any Medellin, Colombia
Voadika ny 03 Avrily 2010 9:41 GMT
Vakio amin'ny teny 简体中文, 繁體中文, Español, বাংলা, English
Heniky ny lalaom-panatanjahantena sy ny lanonana isan-karazany efa roa herinandro izao ny any Medellin, Colombia mandritra ny handraisan'ity tanàna ity ny Lalao Amerikana Atsimo faha-IX (ODESUR) ka ifaninanan'ny firenena Amerikana Latina handrombahana medaily amin'ny taranjam-panatanjahantena isan-karazany. Miala amin'ny mahazatra kely noho izany na ny tompontany na ny vahiny hitsidika toerana isan-karazany sy hijery lalaom-panatanjahantena. Ireto manaraka ireto ary ny lahatsary mampiseho ny niainan'ny tsirairay amin'izy ireo nandritra ny fanatontosana ny fifaninanan-dalao.
Afa-nanatrika ny lanonam-panokafana i Carlos Esteban Orozco. Ao amin'ity lahatsary maharitra efatra minitra ity no hanarahantsika azy mampiseho izany lanonana izany, nipetraka niandry nandritra ny ora vitsivitsy mandra-piandry ny fanombohany, ny nisongadina tamin'ity lanonana ity moa dia ny famaranana azy tao anatin'ny afomanga izay nanazava ny lanitry ny tanàna.
Tao amin'ny lanonam-panokafana ihany koa i Lully saingy ny lafiny hafa noho ny an'i Carlos Orozco no hitany: rehefa tonga teo an-kianja izy dia ny mpiasa nivory nitaky karama tsara kokoa sy asa mendrika kokoa no hitany. Niresaka tamin'ny sasantsasany tamin'ny atleta izy sy niaraka tamin'ireo nitady toerana ho an'izay tsy afa-niditra tany anatin'ny kianja: mipetraka eo ivelany, mijery ambadiky ny fefy. Na dia nolazaina ho an'ny rehetra aza ny lalao dia tsy nahazo tombony tamin'izany loatra ny vahoaka manontolo.
Tahaka izany ihany koa ny niainan'i Ana Vallejo sy i Juan David Escobar izay nikasa hijery ny lalao, saingy nahatsikaritra fa tokony tonga 3 ora mialoha raha te-hahazo toerana. Nivezivezy nijery ireo toeram-pilalaovana vaao izy ireo ary nitsikilokilo tanelanelan'ny lavaky ny rindrina nialoha ny hodiana. Indro ny lahatsarin'izy ireo:
Tsy mba nanana olana toy izany kosa i Diana Perez raha niditra ny kianjam-pilalaovana. Inona ny fikany? Tonga mialoha eny. Tafiditra tamina lanonam-panatanjahantena maro izy:
Nanatrika ny lanonam-pamaranana i Lina11co, ary ity manaraka ity ny lahatsary noraisiny teny an-tokotany, izay ahitanao tarika mpanao akrôbasia mihantona amina randram-by tazonina fibatana enta-mavesatra (grue), metatra avo ambonin'ny mpijery:
Raha tiana moa ny hijery ny lanonana fanokafana sy famaranana, dia hita an-tserasera ny lahatsary fenon'ny TV an-toerana TeleMedellin.
Bitsika : nalaina ho ao anatin'ny andiam-mpampisehoana an-tserasera Todo lo que hay izay andraisako anjara ny sasantsasany amin'ireo lahatsary ireo.